अनि उनी हामीलाई रुवाउँदै गइन ! – HK Tube Nepal
उनको शरीर निकै कमजोर देखिन्थ्यो । नारी हुन् नि उनी ! लाखौं बोझ भएपनि परिवारको खुसीको लागि उनी ती पिडालाई सहजै सहने कोसिस गरिरहेकी हुन्थीन ।
सनम रोक्का ७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १२:३७
” ल है छोरा ! हामी मर्नुभन्दा पहिला नाति खेलाउन पाउँनुपर्छ । नातीको मुख हेरेर मर्यो भने स्वर्ग पुगिन्छ । खोई कहिले पूरा गर्छस , तैंले हाम्रो सपना । “
यहि भन्दै सधैं मलाई झस्काईरहनु हुन्थ्यो मेरो बुढा भएका बाआमा । मैले बिहे गरेको पनि ४ बर्ष पुगिसकेको थियो । मेरा ३ जना छोरी सन्तानहरु थिए ।
म पनि घरी-घरी झस्कीरहन्थे । मलाई एउटै डर थियो कि फेरि पनि मेरो सन्तान छोरी भँइ भने मेरो बुबाआमाको सपना के होला, के सोच्नुहोला ? के सोच्ला यो पुरुष प्रधान समाजले अनि के सज्ञा देला मलाई ?
म एक पढेलेखेको युवा ! मलाई थाहा छ , छोरा र छोरी एक हुन्। आजको आधुनिक युगमा छोराछोरीमा फरक छैन ।र, फरकता देखाइनु पनि हुँदैन ।
म सोच्छु ! छोराले गर्न सक्ने धेरै काम छोरीले पनि त गर्न सक्छिन। तर, फेरि कहिल्यै सोच्छु उसो भए छोरा मान्छेको पनि पाठेघर हुनु पर्थियो, छोरीको रुद्रघण्टि हुनुपर्थियो, पुलिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग एउटै हुनुपर्थियो ।
छोरी जन्मिनुलाई घरमा लक्ष्मीको आगमनको रुपमा लिइन्छ। छोरी घरको सौन्दर्य हो । छोरी हामीले पूजा गर्ने लक्ष्मी, सरस्वती, कालीको रुप हो । फेरि व्यवहारमा चै छोरी जन्माउने नारीलाई अलक्षिना, अभागी, रुखो भनेर पुकारीन्छ।
हो ! यस्तै समाज र परिवारको पुरातनवादी सोच, नैतिक आचरण र व्यवहारिक चलनदेखि निकै पिडित हुँदै आइरहेको थिए म । एकान्तमा बसेर ती मेरा तीन छोरी सन्तानहरुको भविष्य, मेरि उनिले दोश्रो छोरी जन्माउँदा उनले व्यहोरेको र मैले महसुस गरेको पिडा, चार महिनासम्म बेडबाट उनी उठन नसकेको कुरा सम्झँदै एक्लै भक्कानिए ।
बुढा भएका बाआमाको टुट्न लागेको सपना, छोरीहरुले तिहारमा हात खाली राख्नु परेको दृश्य र मेरि उनीको कमजोर शरीरको भुमरीमा म फसिरहेको थिए। हिन्दु धर्मका अनुसार छोरा नहुनेको स्वर्गको बाटो खुल्दैन भनेर भनिरहनु हुन्थ्यो मेरा बाआमा । उहाहरुलाई पौराणिक कथाहरुले बेस्सरी पकडेको छ । यो उहाँहरुको दोश हैन , समाज नै यस्तै छ ।
उनी फेरि गर्भवती भइन ।
यसपटक त नाति नै जन्मिन्छ छोरा, हेर त तेरि बुढी कति अल्छी भाकी छे । ” भन्दै आमा खुसी बन्नुहुन्थियो । यसपाली चै तिमिहरुको भाईनै जन्मिन्छ, के नाम राख्छौं । ” भनेर आमाले घरी-घरी नातिनिहरुलाई सोध्नु हुन्थियो। ।
उनीहरु पनी मुसुक्क हाँस्थे , “अहिले त पक्कै नाति नै जन्मिन्छ । हिजो सपनामा पनि नाति जन्मिने लक्षण देखेँ । ” बा गुनगुनाउनु हुन्थ्यो ।
करिब एक महिनापछी उनलाई ब्याथाले च्याप्यो, हामिले नजिकैको अस्पतालमा लग्यौं । उनी प्रस्रव पिडामा छट्पटी रहेकी थिइन । छेवैमा बसेकी मेरि आमाको अनुहारमा खुसी र कताकता निराशाको बादल छाईरहेको पाउँथें ।
घरी-घरी मलाई हेरेर छोरै जन्मिछ होला है भन्दै मनको वहाब पोख्नु हुन्थियो । ” छोरा जन्मियो भने के नाम राख्ने होला ? कति माया गर्छस नि ? ” भनेर मलाई सोध्नु हुन्थियो। म भने मौन थिए । मलाई छोरा या छोरी जन्मिने चिन्ता भन्दा उनको बढी चिन्ता लागिरहेको थियो ।
हाम्रो बिहे हुँदा उनी १८ बर्षकि थिइन, म भने २० बर्षको । हाम्रो सानै उमेरमा परिवारको दबाबले विबाह भयो ।
तिनजना छोरीहरुको जन्मपश्चात उनी निकै कमजोर भइसकेकी थिइन । उनको पिडादायी अनुहार हेर्दा म माथी झनै ठूलो पहाड खसिरहेको महसुस हुन्थियो । मैले कतै गल्ती त गरिन, उनी माथी अब के बित्ने होला मलाई बारम्बार पिरोलीरहेको थियो ।
” हे भगवान् मेरो नाति नै होस् । ” आमा हात जोड्दै प्राथना गरिरहनु भएको थियो ।
” अहिले हात जोडेर नाति-नातिनी हुने हो र, कस्तो बुद्धि होला ? ” छेउमै उभिएका गार्ड दाइले कटाक्ष गरे ।
उनलाई भित्र लगेदेखी मेरो मनमा अनेकन प्रश्नहरु उब्जिरहेका थिए । कुनै सकरात्मक थिए त कुनै नकारात्मक। केहि छिनमा डाक्टरहरु आएर उहाँको अप्रेसन गर्नुपर्छ भने ” अवस्था गम्भीर हुँदै गइरहेको छ । हामी सक्दो प्रयास गर्छौं ।” त्यसपछी उनलाई अप्रेसन थिएटरमा लगियो । हामी स-परिवार भगवान र डाक्टरको भरोसामा थियौं । त्यतिबेला
मैले नारीको पिडालाई अझ बढी महसुस गर्ने मौका पाएँ । नारी र पुरुष एउटा रथका दुई पाङ्ग्रा भनेर वर्णन र व्याख्या गर्नु पनि निर्थक लाग्न थाल्यो । छोरीको बाबुले त समाज र परिवारमा सम्मान पाउँदैन भने त्यो छोरी कसरी समाज र परिवारमा सम्मानित भएर बाँच्न सक्ली ? मलाई त छोरा र छोरीमा भिन्नता छैन भन्ने लाग्थ्यो तर यो समाजका बुज्रुकहरूले यो कुरा आत्मसात गर्न सकेका रहेनछन् ।
कर्तव्य बिर्सेर अधिकार मात्र खोज्ने आजको समाजले आफ्नो चिन्तनमा आमूल परिवर्तन नगर्दासम्म छोरा र छोरीको भेद हट्दैन । त्यसो त भेद हटाएर समानता ल्याउन खोज्दैमा आउने पो कहाँ हो र ? म एक्लैले समानताका कुरा गरे पनि प्रकृतिले नै फरक बनाइदिएको छ ।
जन्मेदेखी नै नारी र पुरूषलाई बोली र व्यवहार दुवैमा फरक बनाउँदै हुर्काइएको रहेछ । उदाहरण पनि खुब दिन्छौँ हामी । महिलाले राष्ट्रपति भएर देश चलाएका छन्, प्रधानमन्त्री बनेका छन्, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट त कति हो कति ! भाषण सजिलै छाँट्छौँ हामी ।
मञ्चमा नारी स्वतन्त्रताको वाक्यहरु कुर्लीकुर्ली छाँटेर आफ्नो घरमा गई श्रीमती कुट्ने महान काजीहरू थुप्रै छन् हाम्रो समाजमा । जिउँदै छँदा जगल्ट्याउने र मरेपछि शोक काव्य लेख्ने कविहरू पनि छन् यहि समाजमा ।
नारीले यसो गरि त्यसो गरि भन्दै चोकमा गफ छाट्ने शासकहरु घरमा गएर छोरीको कामै छैन भन्ने स्वाभामानीहरु पनि ट्न्नै पाइन्छन । आधा आकाश ढाकेको नारीलाई सम्मान खोइ ? किन सधैं अपहेलित हुनुपर्ने ? हिंसा किन ? भन्ने कुरा मनमा खेलिरहेको थियो ।
एक्कासि कसैले मलाई बोलाएको जस्तो आभाष भयो । त्यहाँ एकजना नर्स आइपुगिन र आत्तिएर मलाई केही भन्न खोजे जस्तो गरिरहेकी थिइन् । त्यतिकैमा आमा पनि मेरो नजिकै आउनुभयो । मेरो मनमा अनेकन कुराहरु खेल्न सुरू गरिसकेका थिए ।
ती नर्सले एकै शब्दमा भनिन् ” हामीले उहाँलाई बचाँउन सकेनौं , छोरी भनी सकुसल छिन । ” ठूलो आँधीले सबै तहसनहस बनाए जस्तो लाग्यो ।
२५ बैशाख २०७८, शनिबार १२:२५